“Management & Science University, Malaysia မှ MBA အတွက် Scholarship (၁၅)ဆုချီးမြှင့်မည်”
Management & Science University, Malaysia မှ မေလ တွင်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် (Batch-7) တန်းခွဲသစ်အတွက် MBA အတွက် President’s Education Award ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
President’s Education Award ရရှိသူများသည် MBA ကျောင်းလခ၏ (၂၅%) မှ (၅၀%) အထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုသင်တန်းအတွက် ပညာသင်ဆု (၁၅)ဆု ချီး မြှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
**လျောက်ထားလိုသူများ Scholarship Exam ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း လျောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။**
Application Closing Date-3May, 2019
Scholarship Exam Date-5May 2019 (Sunday)
Time- 4:00 PM to 5:00 PM
Venue- Nanyeng International College-NIC
ခြံအမှတ် 124 (C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက၂ / နံ၇န်ကျောင်းအနီး)
-မည်သည့် ဘွဲ့ရမဆို (Any Graduate)
-အလုပ်လုပ်နေသူများ (Working Adult People)
-Level6diploma holders (For Example: ABE-UK, OTHM-UK) နှင့် Government Recognized2to3Years Diploma (For Example: ရေကြောင်းသိပံ္ပ (သို့)
AGTI (သို့) (Government Polytechnic များ) ရရှိထားသူများသည် Working Experience
(5) Years ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
**ပညာသင်ကြားစရိတ် တကယ်လိုအပ်နေသည့် Single Parent သာရှိသူများ၊ ကလေးငယ်ရှီပြီး ပညာသင်ကြားရန်
ငွေကြေး အများအပြား မသုံးစွဲနိုင်သူများနှင့် အခြားတကယ်လိုအပ်သူများ၊ အမှန်တကယ် MBA တက်ရောက်လိုသူများကို ဦးစားပေးချီးမြှင့်မည်ဟု
**Management & Science University-MSU အကြောင်းသိကောင်းစရာများ”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ဖွင့်လှစ်သော Malaysia University များတွင် အကြီးဆုံး University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဧက (၂၀) ကျော်ကျယ်ဝန်းသော Campus တွင်၊ Medical College အပါအ၀င် Faculty ဌာနပေါင်း (၈) ခု၊ ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံ၊ Practical Training Center များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော၊
ကျောင်းသား/သူ ပေါင်း ၂၅၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်နေသည့် World Recognized University ဖြစ်ပါသည်။
မလေးရှားအစိုးရ၊ Ministry of Higher Education, Malaysia Quality Assurance (MQA) မှ အသိအမှတ်ပြုသော၊
5 Star Excellence rated ရရှိထားတဲ့ University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
UK , USA , New Zealand , Japan အစရှိသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၄၀) ကျော်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Malaysia တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်
အကောင်းဆုံး University တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
**Accreditation ရရှိထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများမှာ**
Ministry of Higher Education- “Excellent University Status”
FULLY Accredited by Malaysian Qualifications Agency (MQA)
JPA - Public Service Department (Jabatan Perkhimatan Awam)
ABEST21 Japan - The 1st non-Japanese University to be accredited
AAPBS Korea - The Association of Asia-Pacific Business Schools
ASIC UK - Accreditation Service for International Colleges
EFMD Europe - The Management Development Network
AACBS USA - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.
ထိုကဲ့သို့သော ကောင်းမွန်ခိုင်မာသည့် MBA ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသား/သူ များ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားတက်ရန်မလိုပဲ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်သာလျှင်
အလုပ်အကိုင်မပျက်သင်တန်းတက်ပြီး MBA ဘွဲ့ ကိုယူနိုင်ပါသည်။
**Coventry University (UK) မှ Dual MBA ကို 1 Module + Thesis လုပ်ရုံဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရယူ နိုင်ပါသည်။ MSU Learning Center in Myanmar သည် Nanyeng International College၊
ခြံအမှတ် 124 (C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက ၂/ နံရန်ကျောင်းအနီး) ဖြစ်ပါသည်။
MBA ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ဖို့
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှဖွင့်သည့် Online MBA သင်တန်း လျှောက်လွှာတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ
MBA ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
MBA တက်ရင်ကောင်းမလား? မတက်ရင် ကောင်းမလား?
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်မည့် MBA ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
More in this category: « “ဂျပန်နိုင်ငံ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ဖြင့် အရန်သားဖွားဆရာမသင်တန်းဖွင့်လှစ်”	“Master of Business Administration (Global MBA) သင်တန်းအတွက်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်” »
Genius Coffee ပညာသင်ဆု
သမိုင်းဘာသာ အထူးပြုဖြင့် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့သင်တန်း တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်ဆု
ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ ယောပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး
တက္ကသိုလ် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးဆု ဘယ်လိုလျှောက်ထားမလဲ